Gareen mishineroota Yunaayitid Isteets 17 tu Heeytii keessatti butame
Ijoollee dabalatee gareen mishineroota Yunaayitid Isteets 17 kashlabboota Haitiin ukkaamsamanii butamuu kan garee amantin ergaan sagaleen waraabamee ergamee fi waa’ee haala kanaa quba qabu beeksisee jira.
Ministriin gargaaarsa Kirstiyaanaa kan kutaa Ohio keessa maadheffate ergaa dabarseen akka jedhetti kanneen ukkaamsamanii butaman 17n kun keellaa ijoolleen haadhaa fi abbaan irra hin jiraanne ijaaruu gargaaraa kan turan yoo ta’e, ennaa ukkaamsamanii butaman naannoo sanaa dhabamuu beeksisee jira.
Ergaan daqiiqaa tokkoo sun beeksisa namni akka waaqa kadhatuuf kaa’ame, fi kashlabboonni kun akka qalbii jijjiirrata kan gaafatuu dha.
Ergaan sun akka jedhutti daayirikterri ergama sanaa fi maatiin isaanii akkasumas namni maqaan hin dha’amin tokko maadhee sana keessa kan turan yoo ta’u, kanneen keellaa ijoolleen haadhaa fi abbaa hin qabaanne keessa jiran daawwachuuf dhufan kaan ukkaamsamanii butamaniiru. Daayirikterri ergama mishineroota sanaa angawoota US beeksisanii jiru.
Dubbi himaan mootummaa Yunaayitid Isteetis illee angawoonni gabaasa sana argataniiru jedhan. Nageenyi lammiiwwan Yunaayitid Isteetis biyyootii alaa jiranii illee kan ministeerri dhimma alaa dursa guddaa kennuuf keessaa ti jechuu dhaan dubbi himaan kun dubbatanii, ibsa itti dabalaa garuu hin kennine